CFM: “Tsy lalàna ny dinam-pifanarahana ho an’ny kandidà” | NewsMada
CFM: “Tsy lalàna ny dinam-pifanarahana ho an’ny kandidà”
“Mbola hanao antso avo ary manamafy aho eto: tena ilaina ilay Dinam-pifanarahana noho ny trangan-javatra amin’izao fotoana izao. Tsy lalàna izy iny. Tsy nanao ny komity, raha lalàna izy iny. Tsy misy izany Dinam-pifanarahana izany any Etazonia, any Frantsa… Aty amintsika tany an-dalam-pandrosoana no misy an’io.”
Izay ny fanazavan’ny filohan’ny Komitin’ny fampihavanana malagasy (CFM), i Maka Alphonse, teny Ampefiloha, omaly, momba ny Dinam-pifanarahana ho an’ireo kandidà mba hisian’ny fitoniana mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana manoloana ny fisian’ny ahiahy ny amin’ny filaminana amin’izao fotoana izao. Heverina mba hanana etika sy moraly ny kandidà sy ny mpomba azy mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana. Zava-dehibe eto amin’ny firenena ny hisian’izany fitoniana izany.
Aleo handeha ny fanadihadiana…
“Aleo handeha ny fanadihadiana ny amin’izay tena zava-nitranga”, hoy izy momba ny fisian’ny fametrahana “cocktail Molotov“ tamina tranon’ny kandidà iray eny Ambondrona. Ny maha kandidà ve no nanaovana izany sa amin’ny maha olom-pirenena tsotra azy sa zavatra hafa? Aleo handeha ny fanadihadiana… “Raha sanatria ny maha kandidà azy: manameloka ny fihetsika toy izany izahay“, hoy ihany izy. Tsy mitondra mankaiza ny herisetra.
Raha miahiahy ny amin’ny fitoniana ny mpiray tanindrazana, izay ny hametrahana ny Dinam-pifanarahana hisian’ny fitoniana. Izay koa no hanaingan’ny CFM ireo mpifaninana amin’ny fifidianana hanao sonia izany: arofanina moraly ho an’ny kandidà mba tsy hanao teny mandratra, ohatra, amin’ny fampielezan-kevitra. Mba tsy hifandranitra ny mpiray tanindrazana fa hanao izany amim-pirahalahiana.